Egypta: Mpizahatany Nalaina An-keriny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2017 7:42 GMT
(Marihina fa tamin'ny 22 Septambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Vondrona mpizahatany vahiny miisa 15, anisan'izany ny Italiana miisa dimy, no nalaina an-keriny ny alatsinainy tany atsimon'i Egypta.
Manoratra eto ny The Arabist :
Olona miisa 15, anisan'izany ireo mpizahatany vahiny miisa 11, no nalaina an-keriny tany Egypta, araka ny voalazan'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny Italiana sy ny loharanom-baovao avy amin'ny sampam-piarovana Egyptiana.
Na dia mora aza ny milaza avy hatrany tamin'ny alàlan'ny filazan'ny governemanta israeliana fampitandremana fa lasibatra amin'ny fakàna an-keriny ao Sinai ireo mpizahatany Israeliana, kanefa dia lavitra an'i Sinai ity toerana ity ary mety ho andian-jiolahy tsotra fotsiny no nanao izany, raha heverina fa mangataka tambin'ny takalon'aina izy ireo. Mazava ho azy fa azo heverina ihany koa ny mety hisian'ny vondrona politika mahery setra (Islamista na hafa) ary mikasa ny haka vola amin'ny alàlan'ny fakàna an-keriny, izay manamarika ny fiverenan'ny fikambanana mpikatroka maherisetra ara-politika ao Egypta Ambony. Saingy niahiahy izany manokana aho, kanefa vaovao ratsy ho an'i Egypta ity karazana asa ratsy ity ary famantarana fa tokony harahi-maso bebe kokoa ny sisintany misokatra amin'i Sodana.
Nanoratra momba ny zava-nitranga toy izany ihany koa ato ny Donkeys, Elephants & Crocs :
Nilaza ny manampahefan'ny governemanta Egyptiana fa nitranga tany amin'ny toerana lavitra any akaikin'ny sisintanin'i Sodaney-Egyptiana atsimon'i Aswan ny fakàna an-keriny. Nilaza ihany koa izy ireo fa tsy mbola fantatra ny antsipiriany momba ny vaovao. “Mbola tsy fantatray hoe iza no nanao izany ary tsy fantatray ny toerana misy ny mpizahatany,” hoy izy ireo.
Tsy nisy ny herisetra natao tamin'ireo mpizahatany tany amin'ny Lohasahan'i Neily sy tany atsimon'i Egypta, hatramin'ny nandravan'ny governemantan'ny Filoha Hosni Mubarak ny fitroaran'ny mpikatroka Islamista nandritra ny tapaky ny taompolo 1990.
Tamin'ny taona 1997 ny fanafihana lehibe farany natao tamin'ireo vahiny mpizahatany tao amin'ny Lohasahan'i Neily raha 58 tamin'izany no novonoin'ireo mpikatroka tao amin'ny tempolin'ny tanàndehiben'i Luxor, ao avaratr'i Aswan.
Ary farany, manana hevitra hafa eto i Zeinobia, rehefa nihevitra izy fa tsy vao voalohany ny zava-nitranga toy izao tao amin ‘io toerana io.
Till now the identity of the abductors despite the speculations that they can be from the tribes in the region
Nalaina an-keriny tao amin'ny faritr'i Gilf el Kebir ny vondrona mpizahatany izay toerana nanatontosana ny sarimihetsika English Patient .
Toa tsy vao voalohany izany no nitranga tany amin'ny faritr'i Karkur Talha araka ny voalazan'ireo mponina ao an-toerana izay niresaka tamin'i Al Jazeera, toy ny tranga roa mitovy tamin'izany tamin'ny herintaona ary niafara tamin'ny fandoavana ny tambin'ny takalon'aina ho an'ireo mpaka an-keriny! Tsy fantatray ny momba izany teo aloha, nahoana? Aiza ny fiarovana ??
Tsy nisy vaovao nilaza ny fomba nandoavana ny tambin'ny takalon'iana na tsia.
Hatramin'izao, tsy mbola fantatra ny mombamomba ireo mpaka an-keriny, na dia teo aza ny tombantombana fa mety ho avy amin'ny foko ao amin'ny faritra izy ireo.